२०७४–चुनाव – Page 180 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
वृहत् शान्ति सम्झौता गरिएको आजको दिन
काठमाडौं । आज मंसीर ५ गते । नेपालको इतिहासमा तात्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारका बीचमा वृहत् शाान्ति संझौता भएको दिन । उक्त सम्झौतापछिका उतारचढावका दिनहरुमा एकपछि अर्को गरी जनताका अधिकारहरु खोसिदै गए । यसैबेलामा मधेश, जनजाति, आदिवासी लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको उठान भए । यी आन्दोलनहरु उठ्नुका पछाडिको मूल कारण थियो– जनयुद्धलाई अपूरो र अधूरो राखेर […]
चाकडी र घुसको रकम पुर्याउन नसकेको भन्दै प्रा.डा. अधिकारीले दिए राजिनामा
काठमाडौं । वीर अस्पताल न्यूरो सर्जरी यूनिट १ का प्रमुख प्रा.डा. ध्रुवराज अधिकारीले चाकडी र घुसको रकम पुर्याउन नसकेको भन्दै राजिनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य–जनसंख्या मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै डा. अधिकारीले राजिनामा पत्रमा लेखेका छन्, “विगत १ वर्षदेखि तलबविहीन भएर वीर अस्पतालको न्यूरो सर्जरीमा कामकाज गर्दै आएको र वीर अस्पतालले बारम्बार पत्र लेख्दा तथा […]
फेरि फुट्यो फायगो ज्वालामुखी
काठमाडौं । सोमबार फेरि गुआटेमालाको फायगो ज्वालामुखी बिस्फोटन भएको छ । यस पटकको बिस्फोटन पाँचौं पटकको हो । यसले गुआटेमालामा ठूलो सन्त्रास फैलाएको छ । त्यहाँका जनता यो ज्वालामखीको निरन्तर बिस्फोटबाट निकै भयवित भएका छन् । फायगो ज्वालमुखीले ठूलो महामारी ल्याउने पनि स्थानीय जनता तथा त्यहाँका चिकित्सकहरुले बताएका छन् । पहिलेका ज्वालामुखी बिष्फोटनभन्दा यो निकै […]
Posted in: २०७४–चुनाव, mainNews, Rochak
काठमाडौं । नेपाल मलेसियाबीचमा श्रम संझौता गरिएको तीन हप्ता बितिसके पनि उक्त संझौताको कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । कोलम्बो प्रोसेसका मान्यताहरुलाई अंगीकार गरी गरिएको भनिएको उक्त संझौता कामदारहरुको हितमा रहेको र म्यानपावरहरुो ठगीबाट बच्ने खालको रहेको भनी निकै प्रचार गरिएको थियो । तर लामो समयको पर्खाइमा रहँदा पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा भने यो संझौता अब […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Artha Jagat, Baideshik Rojgar, International News, mainNews
राष्ट्रिय परिचयपत्रभित्र लुकेको सूचना हक
काठमाडौं । सरकारले देशव्यापी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनी अभियानात्मक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हरेक नागरिकका बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकाय अपडेट रहने र उनीहरुमाथि सरकारी पहुँच तथा निगरानी राखिरहने हो । यसको अर्थ तदनुरुप जनताका अवस्थाअनुसार सेवा, सुविधा, उद्दार तथा सहयोग पुर्याउने पनि हो । यसलाई जनताबाट सरकारले सूचना […]
पुनर्जिवित हुँदै कोइराला गुट
काठमाडौं । पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस बढी गुटहरुमा विभाजित छ । गुटैगुटहरुको पार्टी रहेको र ती गुटहरु पनि स्थायी जस्ता भएकाले कांग्रेसका समर्थक तथा शुभचिन्तकहरु झट्ट खुल्न र भावनात्मक कुराहरु आदानप्रदान गर्न हिच्किचाउँछन् । उनीहरु कतिपयले त कुन आफ्ना विचारसँग मिल्ने नेताहरु हुन् त्यो पनि थाह पाउँदैनन् । तर यस्तो अवस्थामा कांंग्रेसीहरु सकेसम्म आफूहरुलाई सम्हालेर […]
पत्रकार खसोग्जीको हत्याआवरणमा साउदीसँग हतियार बार्गेनिङमा ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले पत्रका जमाल खसोग्जीको हत्याको श्रव्य सामग्री आफ्ना कानले नै सुन्न पाएको बताएका छन् । श्रव्य सबैलाई सुनाउन नसकिने हृदय विदारक रहेको कुरामा पनि उनले जोड दिएका छन् । यो श्रव्य सुनिसकेपछि निकै पीडा र सस्यामा रहेको कुरा पनि बताएका छन् । अमेरिकाका समर्थक तथा साउदी राजपविारका कट्टर विरोधी […]
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको अख्तियारी प्राप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण निवारण गर्ने हेतुले स्थापित स्वायत्त संस्था हो । यसको खर्चपर्चको बजेट, प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति र समबद्धताका हिसाबले सरकारसँग रहने भए पनि यसले गर्ने काम संविधानतः स्वयत्त रहने भनी तोकिएको छ । यसको अर्थ हो यो संस्था शक्तिसम्पन्न स्वायत्त संस्था हो । तर पछिल्लो चरणमा आएर […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Jiwan saili, mainNews
ब्राजिलमा कार्यरत आफ्ना ८ हजार चिकित्सकलाई क्युवाले फिर्ता बोलायो
एजेन्सी । आफ्ना ८ हजार चिकित्सकलाई क्युवाले स्वदेश बोलाएको छ । ब्राजिलमा कार्यरत ८ हजार आफना चिकित्सकलाई स्वदेश फर्कन क्यूवा सरकारले निर्देशन दिएको हो । ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जेर बोल्सोनारोले चिकित्सकको योग्यताप्रति प्रश्न उठाएपछि क्यूवाले स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको हो । चिकित्सकको तलबको ७५ प्रतिशत क्युवाले राख्ने तथा परिवारको साथमा समेत नपठाउने ब्राजिलका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति […]
एकीकृत बस्ती विकासको योजनाभित्र लुकेका केही खतरनाक तथ्यहरु
काठमाडौं । एकीकृत बस्ती विकासका लागि स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले अधिकार दिएको बताएको छ । क्रमशः सहरीकरण हुनु नै विकास हो भन्ने निम्न पुँजीवादी सोचाइ वर्तमान सरकारमा रहेको देखिन्छ । वस्ती विकासको यो नमूना साम्राज्यवादी देश तथा सरकारहरुले विकासशील तथा कम विकसित देशहरुमा वस्ती विकासको नमूनाका लागि एनजीओ तथा आइएनजीअनो मार्फत् […]